Ardeyda dalka ku cusub oo ku yar iskuulada gaarka loo leeyahay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ardey dhigato iskuul gaar loo leeyahay. sawir: Claudio Bresciani/TT
Ilmaha dalka ku cusub
La daabacay torsdag 3 augusti 2017 kl 17.28
Kadib markii sharci iskuulka dhawaan wax lagabaddelay oo fursad loo siiyey iskuulada qaas loo leeyahay qaabilaada ardeyda dalka ku cusub ayaa iskuulo badan goosteen in safka loogu jiro soo gelidda iskuuladas qayb u qoondeeyaan ardeyda dalka ku cusub. Balse illa iyo hadda tiro ardeyda dalka ku cusub ee soo gashay iskuulada goonida loo leeyahay ayaa aad u hooseysa sida uu maanta wariyey wargeyska Dagens Nyheter.
Kunskapsskolan oo ah shirkad leh iskuulo hoose oo kor u dhaafa 28 ayaa xilli dugsiyeedkii gu’aga qaabilshay 29 ardey oo dalka ku cusub. Fredrik Lingren oo ah maareeyaha Kunskapsskolan ayaa qaba in loo baahan yahay degmooyinka in la socodsiiyaan waalidiinta iyo ardeyda dalka ku cusub in ay jiraan iskuulo kale oo aan aheyn kuwa degmada leedahay.
- Dacab qoyska dalka ku cusub waxa ugu horeeye ee ay is-weydiinayaan ma ahan iskuulkee ayaa aadeynaa. Waxaa loo baahan yahay in degmada xiriirka la leh qoyska dalka ku cusub in ay la socodsiiyaan ardeyga in jirto fursad uu ku aadi karo iskuulada goonida loo leeyahay oo ardeyga ka caawiyaan si uu iskuulo kala duwan u doorto, ayuu yeri.
Iksuulada qaas loo leeyahay waxaa loo galaa saf, taas oo khasab uu ka dhigayo sharicga dalka, laakiin dhamaadkii sannadkii hore ayaa sharcigan isbaddel lagu sameeyey oo fursad loo siiyey iskuulada goonida loo leeyahay in ay saf gaar ah u qoondeeyaan ardeyda dalka ku cusub, waa haddii iskuulka doonayo ardeyda dalka ku cusub in uu qaabilo. Iskuulada qaaska loo leeyahay kuwooda ugu caasan ayey saf dheer loogu jiraa iyadoo xataa ilmaha saf la geliyo mar ay dhashaan. Balse iskuuladan ayaa intooda badan ku oolin xaafadada ay ku badan yahiin dadka asalkooda dibaha ka soo jeedo.